नारायणगढको डिजेमा झुमे चितवने, अब आउने पालो तपाईको ? – Saurahaonline.com
नारायणगढको डिजेमा झुमे चितवने, अब आउने पालो तपाईको ?
चितवन, २९ पुस । प्राय खेलमय, र साझाँ परेपछि सुनसान हुने क्याम्पाचौर । शनिबार विस्तार साझँ पर्दै थियो । १२ औँ चितवन महोत्सव अन्र्तगत फुड फेष्टिवलको उद्धघाटन भो, दर्शक भरिदै गए । खानाको विभिन्न परिकारमा स्वाद लिनेहरुको भिड । अनि विगे खेल । अनि त्यसपछि केहि सास्कृति प्रस्तुती ।
नारायणगढको डिजे नाचमा झुमे चितवने
नारायणगढको डिजे नाचमा झुमे चितवने, अब आउने पालो तपाईको ?
Publiée par Sauraha online sur Samedi 12 janvier 2019
गायक भुवन प्याससहितको केहि गायक गायिकको सागितिक प्रस्तुती रमाएका दर्शक एकाएक उफ्रिन थाले । बच्चादेखि बुद्धसम्ममा फरक माहोल तातियो । स्टेजमा पुगे नारायणगढका व्यवसायी ज्ञानेन्द्रमान शाक्य अनि भने । अब पालो डिजेको । महोल तात्यो । नाच्न् सुरु भो । यो अनि एक पछि अर्को मानिसहरु खाना छोडेर डिजेमा रमाए ।
मैले अच्चम परे काठमाडौँ देखि चितवन घुम्न आएका काशी शर्माले भने । फुड फेष्टिवल भनेर आएको डिजेमा रमाउन । कस्तो रमाईलो । उनी मात्र होईन् । शनिबार देखि सुरु फुड फेष्टिवलमा हरेक दिन डिजे हुनेछ । जसमा दर्शक रमाउनेछन् ।
उनी मात्रैनारायणगढकै युवा व्यवसायी चन्दन अग्रवाल पनि निकैउत्साहित देखिन्थे । अब नारायणगढमा नै हुर्किए यो पटक फुड फेष्टिवल ववालै रहेछ । यसरी डिजेमा आफै ठाउँमा रमाउन पाउदा । आनन्द भो । उनी र शाक्य नाच्दा मोहोलै फरक भएको थियो ।
11 thoughts on “नारायणगढको डिजेमा झुमे चितवने, अब आउने पालो तपाईको ?”
I visit every day some websites and sites to read posts, however this webpage gives
You’re so intelligent. You understand thus considerably in terms of this topic, produced me individually imagine it from numerous varied angles.
I to find it very bothersome to tell the reality however I’ll definitely come again again.
What’s up, all the time i used to check weblog posts here early in the dawn, for